Iskena seBarcode eneNgcaciso ye-1D Abavelisi & nababoneleli-kwiFactory ye-1D eneNcingo yeBhakhowudi yeSkena
I-MINJCODE eNxibelela ngeNdlela yeLaser yeBarcode Reader ene-Adjustable Stand MJ2806AT
Iskena sethu sebhakhowudi senziwe ngeplastiki ye-ABS ekumgangatho ophezulu iqinisekisa ubomi benkonzo ende, Ukumelana nokuya ku-5.0 ft/1.5m Ukuwisa ukuya kwi-Concrete, i-IP 54 iBanga lokungaGciphi nothuli kunye nokumelana naManzi, uyilo lwe-ergonomic, ukuziva ukhululekile ukubamba.
MINJCODE Ixabiso elitshiphu eliXelelwe nge-1D CCD ephathwayo ngeKhowudi yeBha ye-USB yokufunda iMJ2816
Iskena seBhakhowudi eneeNcingo zeCCD Ultra High 2500 Pixel Precise Resolution USB Bar Code Reader, iplagi kunye nokudlala.
Ngeentambo 1d Laser Barcode Reader USB/RS232/PS2 Interfaces Ngokuzikhethela, MINJCODE MJ2808
Isisombululo esiphezulu se-3.3mil: kulula ukufunda iikhowudi zebar ezinoxinano oluphezulu, umgangatho ophezulu webarcode scanner ephathwayo, imodyuli ye-injini ene-RS232 ujongano lwe-USB ixhasa ibhakhowudi ye-1D. Inqanaba lamashishini: IP54.
Iskena seBhakhowudi esiPhathwayo se-1D esineNcingo zeCCD esidumileyo MINJCODE MJ2816
Esi sikena sebhakhowudi sisebenza kwikhowudi yendalo iphela enomgangatho omnye kunye nescreen sebarcode ccanning, inkxaso windows 7/8/10,windows XP,Inokucocwa ngesepha, amanzi okanye ezinye izicoci zolwelo.
Injongo ngokubanzi Ukubanjwa ngesandla kwe-1D Bi-Directional enentambo yeLaser Barcode Scanner MINJCODE MJ2809
Iskena esinentambo selaser yebhakhowudi esiphathwa ngesandla siskena kwaye sichaza iikhowudi zebhakhowudi ze-1D ezinentambo, 3.3mil isisombululo esiphezulu: kulula ukufunda iikhowudi zebhawudi ezinoxinano oluphezulu.
Esebenza kakuhle enentambo 1D ephathwa ngesandla ibhakhowudi iskena MJ2806
I-32-bit ye-ARM enesantya esiphezulu se-CPU, uyilo oluthambileyo lwe-ergonomic, ulwakhiwo olumagingxigingxi, iplagi kunye nokudlala.IP54 iBanga lokungagqumi uthuli kunye nokunganyangeki kwamanzi.Uvavanyo lweDorp:1.5m.
Iskena seBarcode ye-CMOS iSensor ye-USB ye-USB ene-Stand MJ2806AT
Kulula ukusebenzisa iskena sebhakhowudi ye-laser kumashishini, iivenkile, ivenkile enkulu, ithala leencwadi, inkampani ecacileyo, ivenkile ethengisayo kunye nemisebenzi yokugcina.
I-1D Laser ye-USB yeBarcode Scanner Ukuziva ngokuzenzekelayo nge-Stand MJ2808at
Ixabiso eliphantsi le-oem linedimensional ikhowudi yomenzi waseChina，I-Flexible adjustable stand ye-hands-free scanning.Iplagi kwaye udlale, ufakelo olulula ngalo naliphi na izibuko le-USB.
Ubuchwephesha boMveliso be-1D yomfundi webhakhowudi enentambo enestand se-IOS Android MJ2809at
Isikena sethu sebarcode ufakelo olulula, kulula ukuyisebenzisa, uyilo lunesitayile, lufanelekile ukukhetha kwiSupermarket Library Express Company Retail Store Warehouse.
ISikena seBhakhowudi ephathwayo yeCCD eneeNcingo UkuKhanya okuBomvu isiFundo seBhakhowudi ye-1D MJ2816
Imodyuli ye-OEM eZinzisiweyo yeMount Bar Code Scanner kuMenzi we-MJ2260
Uyilo lwemizi-mveliso, oluzinzileyo noluzinzileyo lufanelekela ukukhuselwa ngcono, lulungele zonke iintlobo zemeko yokusebenza erhabaxa.
Ubungakanani obuncinci bokubumbana, ngokulula ukudibanisa kwisixhobo, ngakumbi usetyenziso lwendawo elinganiselweyo.
I-32-bit yesantya esiphezulu se-CPU, yenza i-decoding ekhawulezayo ekhokelela kwiklasi njengamaxesha angama-200 ngomzuzwana.
Ujongano oludumileyo lwe-USB, RS232, TTL, PS2 lusebhodini, luxhasa iLinux, Windows, Android, IOS inkqubo.
Ukusebenza okugqwesileyo kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi kunye neendleko-ukusebenza.
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Iskena seBhakhowudi yaseTshayina, Iskena seBhakhowudi yeQr, Qr Code Reader Barcode Scanner, Iskena seBhakhowudi, Iskena seBhakhowudi esibambe ngesandla, Iskena seBhakhowudi esitshiphu, Zonke iimveliso